Home AFRICAN STARS Mohamed Elneny Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na-adịghị Agbanwe Ihe
LB na-egosi Full Story of a Football Star kasị mara aha; "Neny". Ụmụaka Mohamed Elneny Akụkọ nke a na-agbakwụnye akụkọ na-enweghị isi akụkọ eziokwu na-ewetara gị ihe ndekọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndụ ezinụlọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọdịdị ya na pitch mana ole na ole tụlee Mohamed Elneny Bio nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Mohamed Elneny Nwatakiri Akụkọ nke Na -Ndụ mbido
A mụrụ Mohamed Naser El Sayed Elneny na 11th nke July 1992 na El Mahalla El Kubra, Egypt. Mgbe ọ bụ nwatakịrị, Elneny ga-abụ onye nwere bọl na ụlọ ndị Ijipt ya.
As Guardian tinye ya, ọ bụ ndị na-agba ọsọ n'okporo ámá na-adịghị agwụ agwụ bụ ndị dinara na bọl mgbe ọ bụ nwata. Nbido mbụ ya na football si n'aka nna ya, bụ onye na-eto eto na-eto eto na Baladeyet Al-Mahalla dị n'Ijipt. Ejiri aka football mee mgbe Elneny dị obere.
"Echetara m na papa m gwara m na m ga-eji ụgbụ ụra na-ehi ụra," Elneny na-ekwu. "Ọ sịrị: 'Ị ga-ejikọ na bọl.' Ọ malitere inye m ọzụzụ mgbe m dị afọ atọ. Ihe kacha masị ya bụ na m ghọrọ ndị ọkachamara n'ịgba chaa chaa. "
Elneny malitere ịgba egwu ya na Al Ahly. Na 2008, ọ kwagara El Mokawloon SC n'oge oge 2010-2011. Elneny toro ma ghọọ onye ọ bụla n'ime ndị na-amalite ọrụ. Mgbe e mesịrị na Stadium Stadium ọdachi, na mmalite nke February 2012, e kwụsịrị Njikọ Mbụ n'Ijipt ma kwadoo egwuregwu niile nke 2011-12 Egypt Premier League. Na 10 March 2012, ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke Egypt kwupụtara mkpebi ha ịkagbu oge fọdụrụnụ.
Elneny ga agba ọkụ na njem ya na Basel nke Switzerland tupu ya eruo Arsenal. Ya Euro 5 Euro na-emeso Arsenal bụ ihe mesịrị gbanwee ọgaranya ya.
Mohamed Elneny Nwatakiri Akụkọ nke Na -Ndụ mmekọrịta
Elneny na-esi n'ike nwunye ya mara mma mara mma. Di na nwunye a nwere nwa nwoke aha ya bụ Malik.
Elneny abụghị ụdị ịkwalite mgbasa ozi a na-achọghị site n'ọhịa ma ọ bụ dọpụ uche ya site na ọkụ ọkụ nke obodo ahụ. Elneny na-elebara ihe gbasara ezinụlọ na ụlọ ha anya. Site na mgbe ọ malitere ọrụ ọrụ, njikọ dị n'etiti Elneny na nwa ya nwoke na-agbakarị ọsọ.
Mohamed Elneny Nwatakiri Akụkọ nke Na -Ndụ nke Onye
Mohamed Elneny nwere àgwà na-esonụ na àgwà ya.
Ike Mohamed Elneny: Ọ bụ onye nwere ọgụgụ isi, onye na-eguzosi ike n'ihe, nke mmetụta uche, onye nwere ọmịiko, onye na-ekwenye ekwenye, onye na-enweghị atụ, nke dị nfe, onye na-eme njem na ezigbo enyi.
Mmezi Mohamed Elneny: Mgbe ụfọdụ, Elneny nwere ike ịda mbà n'obi, na-enweghị atụ ma na-enyo enyo.
Ihe Mohamed Elneny nwere mmasị: nkà ihu, ihe omume ntụrụndụ nke ụlọ, ịnọ ọdụ na nso ma ọ bụ na mmiri, na-enyere ndị a hụrụ n'anya, ezigbo nri na Mohamed Salah, enyi ya Ijipt.
Ihe Mohamed Elneny na-achọghị: Na-ekpughe ozi nke onwe onye.
Mohamed Elneny Nwatakiri Akụkọ nke Na -si ebi ndụ
A na-achịkọta ndụ Mohamed Elneny n'otu foto. Ọ bụghị ndị na-ama egwuregwu kasị baa ọgaranya n'ụwa, ma ọ na-enweta akụ na ụba ya ma jiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi.
Mohamed Elneny Nwatakiri Akụkọ nke Na -Ndụ Obi Ọjọọ
Ọ bụrụ na ị na-aṅa ntị na Elneny ebe ọ bụ na ọ sonyeere Arsenal na Basel na 2016, ị ga-amara na onye Ijipt ahụ nwere mmasị na ya.
Nke mbụ, e nwere ọgba aghara nke Alexis Sanchez karịrị Chile na-erughị eru maka World Cup, na n'oge na-adịbeghị anya, e nwere ihe mgbagwoju anya dị na otu onye ahụ mgbe ọ hapụsịrị Arsenal maka Manchester United.
Mba Egypt gbanyekwara agwa ndị ahụ na Mesut Ozil ọhụrụ nkwekọrịta tupu ya ebute. Moh Salah mgbe ebubo ebubo Elneny ebubo na o na-anwa ime ndi mmadu ka ha jiri aka ha kwadoro ya ka ha weputara ya votu na achoputawo ya na ndi otu Player Player nke Month.
Mohamed Elneny Nwatakiri Akụkọ nke Na -Ndụ Ezinụlọ
Mohamed Elneny bụ onye si n'agbata ndị na-eto eto na-aga n'ihu tupu ego akwụmụgwọ football na-emesị kwụọ ụgwọ maka ya na ọṅụ nke nne na nna ya mara mma, Mr na Mrs Naser El Sayed Elneny. Nne ya bụ onye na-elekọta ụlọ mgbe nna ya bụ onye nlekọta ntozu ezumike nká na-elekọtazi ọrụ nwa ya.
Ihe ịga nke ọma Elneny taa bụ n'ihi ọrụ papa ya dị ka onye ntorobịa. Karia nke a, na-akwado nne ya, ụmụnne ya nwoke na ụmụnna nwanyị.
Mohamed Elneny Nwatakiri Akụkọ nke Na -Ndụ okpukpe
ọ bụ onye Alakụba dị nsọ, na-ekpe ekpere ugboro ise n'ụbọchị. Ọ na-eme ka ekpere ya na njem ndị njem. Na enweghi ekpere ekpere ya, Elneny ji ihe egwuregwu ọ bụla kwesiri ịnakwere site n'okwukwe ya. Ọ na-ahụ Ramadan dị ka ọ dị na foto dị n'okpuru.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Mohamed Elneny nke Ụmụaka na akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Egwuregwu Ọchịchị Ijipt
Ainsley Maitland-Niles Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nsogbu
Ulo oru Europe341